Fandavana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > fandavana
Efa milalao dodgeball, volley-ball na baolina izahay taloha fony mbola zaza. Alohan'ny hilalao miaraka dia nanamboatra ekipa roa izahay. Voafidy roa ireo kapiteny roa, izay mpisolo toerana voafantina. Voalohany dia voafidy ho an'ny ekipa ny mpilalao tsara indrindra ary tamin'ny farany dia nisy ireo tsy nitana andraikitra lehibe. Tena nanala baraka ny nifidianana azy farany. Ny tsy fisian'ireo voalohany dia mariky ny fandavana ary fanehoana tsy mendrika.
Miaina ao anatin'ny tontolo feno fandavana isika. Efa niaina izany tamin'ny fomba iray hafa isika rehetra. Angamba ianao nolavina tamin'ny daty iray fa zazalahy saro-kenatra. Mety efa nangataka asa ianao nefa tsy nahazo izany. Sa ianao nahazo ilay asa, fa ny lehibanao kosa nihomehy ny hevitrao sy ny torohevitrao. Angamba nandao ny fianakavianao ny rainao. Na naniratsira zaza ianao na tokony hihaino fa tsy ampy ny zavatra nataonao. Angamba ianao no farany voafidy farany ho an'ny ekipa. Vao ratsy kokoa aza raha tsy navela hilalao amin'ny ekipa ianao. Inona ny vokatry ny fahatsapana ho tsy fahombiazana?
Ny fandavana lalina dia mety hiteraka fikorontanan-toetra toy ny tahotra tsy voamarina, fahatsapana ho ambany na hakiviana. Amin'ny fandavanao izany dia mahatsapa tsy mendrika ianao, tsy raharahanao ary tsy tiana. Izy ireo dia mifantoka amin'ny tsy mahomby fa tsy manohina sy mihetsika mahery setra amin'ny fanehoan-kevitra tsotra. Raha misy milaza hoe: "Tsy dia tsara tarehy ny volonao anio", mety hieritreritra ianao hoe: "Inona no tiany holazaina amin'izany? Midika ve izany fa toa milomano foana ny voloko? » Mety hahatonga anao hieritreritra fa nolavina ianao, na dia tsy misy olona manome tsinontsinona anao aza, fa tsapanao ilay fandavana io. Io fahatsapana io no lasa zava-misy anao. Raha mieritreritra ianao fa tsy fahombiazana, dia manaova toy ny very vola.
Tsy irery ianao rehefa mahatsapa izany fandavana izany. Nolavin’ireo tao an-tanànany i Jesosy3,54-58), nataon’ny mpianany maro (Johanes 6,66) ary avy amin’izay nihaviany hamonjy (Isaia 53,3). Na dia talohan’ny nandehanan’i Jesosy teo amintsika aza, dia nolavina Andriamanitra. Taorian’izay rehetra nataon’Andriamanitra ho an’ny Isiraelita, dia mpanjaka no tiany hofehezin’izy ireo, fa tsy ho azy.1. Sam 10,19). Tsy zava-baovao amin’Andriamanitra ny fandavana.
Nataon’Andriamanitra ho ekena isika fa tsy holavina. Izany no mahatonga azy tsy handa antsika mihitsy. Afaka mandà an’Andriamanitra isika, fa tsy handà antsika Izy. Tena tia antsika i Jesosy ka maty ho antsika Izy talohan’ny nifidianantsika Azy (Romana 5,8). “Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” (Jaona. 3,17). “Tsy hahafoy anao na hahafoy anao Aho.” (Hebreo 13,5).
Ny vaovao tsara dia nofidin'Andriamanitra ho ao amin'ny ekipany ary na dia zanaka ao amin'ny fianakaviany aza. “Satria mbola zaza ianareo, dia nirahin’Andriamanitra ho ato am-pontsika ny Fanahin’ny Zanany, izay miantso hoe: Aba, Ray malala.” (Galatiana . 4,5-7). Tsy maninona na inona na inona fahaizanao satria raha avelanao hiaina ao anatinao Jesosy dia Izy no hikarakara ny zava-drehetra. Mpandresy ianao fa tsy resy! Ny hany tokony hataonao dia ny manaiky izany fahamarinana izany, mipoitra ary mivonona handray anjara amin'ny lalaon'ny fiainana. Mpikambana sarobidy amin'ny ekipa mpandresy ianao.